१० लाखको टिप्स ! - परिहास - नेपाल
अन्तत: काठमाडौँमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलन सम्पन्न भएरै छाड्यो । नेपालजस्तो सानो देशमा एसिया प्यासिफिकजस्तो ठूलो सम्मेलन गर्न पाउनु नै महान कुरा हो । त्यति धेरै राष्ट्रप्रमुख, त्यति धेरै सरकारप्रमुख । नेपाल सरकारले डाक्दैमा कहाँ आउँथे र ? त्यसैले नेपाल सरकार सह–आयोजक मात्र भएर डाक्ने काम अरुलाई गर्न लगाएको । अरुले डाकेकाले सबै आइपुगे ।
केहीले यसैमा आपत्ति गरे । निजी संस्था आयोजक, नेपाल सरकार सह–आयोजक । यो कसरी भयो ? तर यसमा अल्झिने काम नगरौँ । किनभने, यस्तो ठूल्ठूला काममा त्यस्ता स–साना प्रश्न आउाछन् नै । आउन दिऊँ ।
तर जसले जे भनून्, नेपालमा यो सम्मेलन जो सम्पन्न भयो, त्यो साँच्चै ठूलोचाहिँ हो । सम्मेलन सफल भएको खुसियालीमा आयोजकले नेपाललाई १० लाख रुपैयाँको त टिप्स नै दिएर गएको कुरा सुन्नमा आएको छ । १० लाखको टिप्स दिनु सानो कुरा अवश्य पनि होइन । अब यसैबाट अनुमान गरौँ, जुन कार्यक्रमको समापनमा १० लाखको टिप्स प्रदान गरियो, त्यो कत्रो ठूलो सम्मेलन होला ?